Israel oo dhowaan hakineysa duulimaadyada Dubai ee diyaaradaheeda + Sababta - Caasimada Online
Home Dunida Israel oo dhowaan hakineysa duulimaadyada Dubai ee diyaaradaheeda + Sababta
Israel oo dhowaan hakineysa duulimaadyada Dubai ee diyaaradaheeda + Sababta
Tel Aviv (Caasimada Online) – Israel ayaa Axaddii sheegtay inay hakin karto duulimaadyada diyaaradaha Israel ay ku tagaan Dubai maalmaha soo socda, sababo la xiriira muran ku saabsan nidaamka amni, balse loo weecin karo magaalada Abu Dhabi.
Sarkaal Israeli ah ayaa sheegay in nidaamnka amni ee iminka ee saddex diyaaradood oo Israel ah oo u duala Dubai, kuwaas oo kala ah El Al , Israir iyo Arkia uu dhici doono Talaadada, taasi oo ku qasbeysa in wada-xaajoodayaasha labada dal inay isku raacaan mid cusub kahor waqtigaas.
Duulimaadyada tooska ah ee Israel iyo Imaaraatka Carabta ayaa billowday kadib markii labada dal ay yeesheen xiriir rasmi ah sanadii 2020. Boqolaal kun oo Israa’iiliyiin ayaa wixii markaas ka dambeeyey booqday Imaaraatka.
Diyaaradaha Israel ayaa waxay hoos tagaan hay’adda amniga gudaha ee Shin Bet, taasi oo sheegtay in khilaaf kala dhaxeeya dhiggeeda Imaaraatdka uu hakin karo duulimaadyada, balse ma shaacin wax uu yahay.
“Haddii la hakiyo duulimaadyada diyaaradaha Israel ee Dubai waxaa suurta-gal ah in loo weeciyo Abu Dhabi, taasi oo hadda la darsayo,” waxaa sidaas bayaan ay soo saartay ku tiri Shin Bet.
Xafiiska warbaainta Dubai kama jawaabin codsi loo diray oo la xiriiray inay arrintan ka hadlaan.
Haddii la joojiyo duulimaadyada diyaaradaha Israel ee Dubai, waxaa ka faa’iidi doona shirkadda flydubai ee Imaaraatka oo hadda sameysa duulimaad toos ah oo u dhaxeeya Dubai iyo Tel Aviv.